स्वदेशी तरकारी नष्ट गर्ने र गराउनेलाई कारबाही गर सरकार :: Setopati
महामारीको कारण सम्भावित भोकमरीबाट बच्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला स्वदेशमै उत्पादन भएको तरकारी लगायत खाद्यवस्तु नष्ट गर्न लगाउने र गर्नेलाई कडा कारबाही गर सरकार।
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई नै खल्बलाउन खोज्नेलाई देशबाट निकाला गरौँ सरकार। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई नष्ट गराउने र भारतबाट तरकारी नेपालको हरेक क्षेत्रमा पुर्याउने गरेको देखिन्छ।
संकटको बेला नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा स्वदेशमै उत्पादन गरेको यसरी नष्ट गर्नु गलत हो। छिमेकी मुलुक भारतबाट लुकिछिपी सामान भित्र्याउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकार, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले नेपाली किसानको उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल आदि नष्ट गर्दा किन चुपचाप लागेको छ? नेपाल सरकार र अरु नेपाली जनताहरु किन मौन छन्?
कस्तो बिडम्बना हो, कसरी नेपाल आत्मनिर्भर बन्छ? नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल लगायत आदि बारीमै कुहिरहेको छ, तर दिन प्रतिदिन भारतबाट निर्बाध आएको तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यवस्तु सिधै बजार-बजारमा पुगिरहेको छ।
लकडाउन प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रशासनले जनचेतना फैलाउन कम गर्नु पर्थ्यो, किसानको मर्म बुझ्नु पर्थ्यो। तर किसान दाजु-भाइ तथा दिदी-बहिनीको पसिना खेतमै सुक्दा तथा प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले नेपाली किसानको तरकारी, फलफूल आदि नष्ट गराउँदा, सरकार मूलदर्शक छ।
किसानको तरकारी बजारसम्म लैजान वातावरण समेत बनाइदिनु पर्थ्यो। तर प्रहरीले सम्झाई बुझाई गर्नुको सट्टा स्वदेशमै उत्पादन गरेको तरकारीमा कोरोना छ भन्दै उनीहरुलाई हिर्काउने काम गरे। के भारतबाट लुकिछिपी ल्याएृको तरकारीमा कोरोना नै हुँदैन? यो पहिला सोच परिवर्तन गरौं सबैले, किसानलाई यस्तै गरेपछि कहिले देश अगाडि बढ्छ। सरकारले नेपाली किसानहरुको मर्म नै बुझेन।
त्यत्रो ऋण गरेर तरकारी उत्पादन गरे किसानहरुले उल्टै किसानको तरकारी नष्ट गराउने के हुँदै छ हाम्रो देशमा? ऋण गरेको लगानी नै डुब्यो, कृषि पेसा नै गरेर कसरी ऋणबाट उस्किन्छन् नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदिबहिनी?
नेपालले पनि अरु देशको जस्तै आफूमै आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषि र खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा उल्टै किसानको तरकारी नष्ट गराउनु गलत हो। कोरोनाको कारण नेपालमा सबै तिर नकारात्मक असर त पारेको थियो। झन् त्योभन्दा नकारात्मक असर त यी स्थानीय सरकारले पो गर्दै छ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण संकटमा परेको कृषि क्षेत्र उठाउन राज्यको भूमिका बढाउनु पर्छ। महामारीका कारण समस्या कृषि क्षेत्र नै बढी संकटमा छ भने समाधान पनि कृषि क्षेत्रबाटै संभव देखिएको छ। लकडाउनले किसानलाई सामूहिक रूपमा जुटेर काम गर्न नै समस्या परेको छ।
कृषि क्षेत्र जोगाउन तत्काल उचित कदमहरु सरकारले चालिनु पर्छ। कृषक व्यवसायी बन्न नसक्नुको थुप्रै समस्याहरु छन्। जस्तैः बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु, प्राविधिक समस्या, प्रहरी प्रशासनले नै लैजान नदिनु लगायत अन्य थुप्रै समस्या झेल्नु परेको छ उनीहरुले। सरकारले नि ध्यान दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने गरेको असाधारण वर्षाले नेपालका कृषकहरुको पीडा माथि झन् पीडा थपिएको छ। कृषिको लागि भाषणले मात्र पुग्दैन, उचित व्यवस्था सरकारले नयाँ-नयाँ योजना लिएको कहाँ हरायो? कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको मिहिनेत सबै यी स्थानीय सरकारले नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीको पसिना किन खेर फाल्दै छन्?अब किसानहरुलाई झन्-झन् चिन्तामा रहेका छन्।
किनकि स्थानीय सरकारले नै कोरोनाको आंशका गरेर नेपालमा उत्पादन गरेको तरकारी खाडलमा पुर्दै जाने र भारतबाट आएको तरकारी बजार बजारसम्म पुर्याउदा उसमा कोरोना नै रहेनछ। हामी सबैले जिउँने आधार नै कृषि हो तर आज कृषिलाई नै अगाडि बढ्न दिँदैनन यी प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ?
यदि भारतको नाका बन्द भएपछि त नेपाली किसानले उत्पादन गरेको त्यही तरकारी त खान्छौ होला नि। कहिले आउला यी मूर्खता भएका मानवहरुको बुद्धि र कसरी अगाडि बढ्ला हाम्रो देश अगाडि? कस्तो बुद्धिहीन रहेछन्, भारतबाट हजारौं मालबाहक गाडी भित्रिदा कोरोना नसर्ने तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल आदि खाद्यवस्तुबाट कोरोना सर्ने।
यस्तो लापरबाही गर्ने हो भने देश कहिल्यै अगाडि बढ्दैन सरकार। नेपाल सरकारले यस्ता अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कास्की पोखरा र अर्घखाचीमा किसानको तरकारी खाडलमा नष्ट गर्न लगाएका छन्। स्थानीय सरकारले केन्द्रिय सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
यस्तो काम पुन: नदोहोररियोस्।
(लेखक कृषि प्राविधिक अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २१, २०७७, ०१:३२:००